မျောလွင့်သွားတဲ့ “ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း” – Tameelay
“ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း”ဟာ ကူးရင်းခတ်ရင်း ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုပေါ်
တအောင့်ကြာတော့ အဝေးကနေ သီချင်းသံတစ်သံလွင့်လာတာကို
သူကြားလိုက်မိတယ်။ သူချက်ချင်းထရပ်ပြီး အသံလာရာဆီကြည့်လိုက်တော့
လှေငယ်လေးတစ်စီး သူ့ဘက်ကိုဦးတည်ပြီး လှော်ခတ်လာတာကို တွေ့လိုက်တယ်။
လှေရဲ့အလံပေါ်မှာ “ပျော်ရွှင်ခြင်း”လို့ ရေးထားတာကို တွေ့တော့ “ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း” က လှမ်းအော်တယ်။
“ပျော်ရွှင်ခြင်းရေ… ပျော်ရွှင်ခြင်းရေ.. ငါ ရိုးဖြောင့်ခြင်းပါ။ ငါ့ကို လှေကြုံစီးခွင့်ပြုပါ”
“ရိုးဖြောင့်ခြင်း” အကူအညီတောင်းတာကို “ပျော်ရွှင်ခြင်း”ကကြားတော့ ရယ်ပြီး …
“ဟား.. ဘယ်ဖြစ်မလဲ! ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိရင် ငါဘယ်ပျော်တော့မလဲ? ဒီလောကမှာ
ကြည့်စမ်း.. အမှန်တရားတွေပြောလို့ မပျော်ရွှင်ရတဲ့လူတွေ အများကြီး။
ဆောရီးပဲ.. နင့်ကိုငါ မကယ်နိုင်ဘူး”
ပြောပြောဆိုဆို “ပျော်ရွှင်ခြင်း”ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းထွက်သွားတော့
“နေရာ”ဆိုသူရောက်လာပြန်တယ်။ နေရာကိုတွေ့တော့ ရိုးဖြောင့်ခြင်းက
“နေရာ.. နေရာ.. ငါ ရိုးဖြောင့်ခြင်းပါ။ ငါ့ကို နင့်လှေနဲ့အတူ ကမ်းကပ်ခွင့်ပေးပါ”
နေရာက လှေကို အဝေးကြီးလှော်သွားပြီး… “မဖြစ်ဘူး.. မဖြစ်ဘူး.. နင့်ကို ငါ့လှေပေါ်
မတင်နိုင်ဘူး။ အခုလို ငါ့နေရာရဖို့ မလွယ်ခဲ့ဘူး။ နင့်ကိုသာခေါ်သွားရင် ငါ့နေရာတောင်
ငါထိန်းထားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး” လို့ဆိုခဲ့တယ်။
ရိုးဖြောင့်ခြင်းဟာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ နေရာရဲ့နောက်ကျောကို ငေးကြည့်နေခဲ့တယ်။
သူ့ရဲ့အကြည့်မှာလည်း နားမလည်မှုတွေ၊ တွေဝေမှုတွေ ရောယှက်နေခဲ့တယ်။
တအောင့်ကြာတော့ စည်းချက်မညီတဲ့အသံနဲ့အတူ “ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း” ရောက်လာခဲ့တယ်။
ရိုးဖြောင့်ခြင်းက ဝမ်းသာအားရ ခေါ်တယ်။
“ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းရေ.. ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း.. နင့်လှေနဲ့အတူ ငါလိုက်ခဲ့လို့ရမလား?”
“မင်း ဘယ်သူလဲ? မင်းကငါတို့အတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးအမြတ်ပေးနိုင်မှာလဲ?”
လို့ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းက ပြန်မေးတယ်။
ရိုးဖြောင့်ခြင်းက သူဘယ်သူလဲဆိုတာကို မပြောချင်ဘူး။ ပြောလိုက်ရင်
လှေနဲ့မခေါ်သွားမှာလဲစိုးတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးဖြောင့်ခြင်းက ရိုးဖြောင့်ခြင်းပါပဲ။
နောက်တော့လဲ “ကျွန်တော်က ရိုးဖြောင့်ခြင်းပါ”လို့ သူပြောလိုက်တယ်။
“အော်.. မင်းက ရိုးဖြောင့်ခြင်းကို.. မင်းက ငါ့ကိုသက်သက်ဒုက္ခပေးတာနဲ့
တူမနေဘူးလားကွ? ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းတွေ ဒီလောက်များနေတဲ့အချိန် ငါတို့ရဲ့
မရိုးသားတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာ မင်းပါလာလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ?”
ပြောပြောဆိုဆို ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ရိုးဖြောင့်ခြင်းက
မျှော်လင့်ချက်မဲ့ရင်း မဲ့နေချိန်မှာ အဝေးကနေ အသံတစ်သံကိုကြားလိုက်တယ်။
“လူလေး.. လာ လှေပေါ်တက်ပါ”
ဆံပင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေး အဘိုးအိုတစ်ဦးက သူ့ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။
“ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်ကို ကယ်ရတာလဲ?”
“ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာ အချိန်ကပဲ သိလို့ပါ”
အပြန်လမ်းမှာ လှေမှောက်နေတဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ နေရာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကိုတွေ့တော့
“အင်း…….. ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိရင် ပျော်ရွှင်ခြင်းကလည်း ကြာရှည်မတည်မြဲဘူး။
နေရာလည်း မမြဲဘူး။ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းလည်း ကျရှုံးမှာပဲ”လို့ ဆိုခဲ့တယ်။
မူရင်း — http://www.zijiu.org/node/88
“ရိုးသားဖွောငျ့မတျခွငျး”ဟာ ကူးရငျးခတျရငျး ကြှနျးငယျလေးတဈခုပျေါ
တအောငျ့ကွာတော့ အဝေးကနေ သီခငျြးသံတဈသံလှငျ့လာတာကို
သူကွားလိုကျမိတယျ။ သူခကျြခငျြးထရပျပွီး အသံလာရာဆီကွညျ့လိုကျတော့
လှငေယျလေးတဈစီး သူ့ဘကျကိုဦးတညျပွီး လှျောခတျလာတာကို တှလေို့ကျတယျ။
လှရေဲ့အလံပျေါမှာ “ပြျောရှငျခွငျး”လို့ ရေးထားတာကို တှတေ့ော့ “ရိုးသားဖွောငျ့မတျခွငျး” က လှမျးအျောတယျ။
“ပြျောရှငျခွငျးရေ… ပြျောရှငျခွငျးရေ.. ငါ ရိုးဖွောငျ့ခွငျးပါ။ ငါ့ကို လှကွေုံစီးခှငျ့ပွုပါ”
“ရိုးဖွောငျ့ခွငျး” အကူအညီတောငျးတာကို “ပြျောရှငျခွငျး”ကကွားတော့ ရယျပွီး …
“ဟား.. ဘယျဖွဈမလဲ! ရိုးသားဖွောငျ့မတျခွငျးရှိရငျ ငါဘယျပြျောတော့မလဲ? ဒီလောကမှာ
ကွညျ့စမျး.. အမှနျတရားတှပွေောလို့ မပြျောရှငျရတဲ့လူတှေ အမြားကွီး။
ဆောရီးပဲ.. နငျ့ကိုငါ မကယျနိုငျဘူး”
ပွောပွောဆိုဆို “ပြျောရှငျခွငျး”ထှကျသှားခဲ့တယျ။ ပြျောရှငျခွငျးထှကျသှားတော့
“နရော”ဆိုသူရောကျလာပွနျတယျ။ နရောကိုတှတေ့ော့ ရိုးဖွောငျ့ခွငျးက
“နရော.. နရော.. ငါ ရိုးဖွောငျ့ခွငျးပါ။ ငါ့ကို နငျ့လှနေဲ့အတူ ကမျးကပျခှငျ့ပေးပါ”
နရောက လှကေို အဝေးကွီးလှျောသှားပွီး… “မဖွဈဘူး.. မဖွဈဘူး.. နငျ့ကို ငါ့လှပေျေါ
မတငျနိုငျဘူး။ အခုလို ငါ့နရောရဖို့ မလှယျခဲ့ဘူး။ နငျ့ကိုသာချေါသှားရငျ ငါ့နရောတောငျ
ငါထိနျးထားနိုငျမှာ မဟုတျဘူး” လို့ဆိုခဲ့တယျ။
ရိုးဖွောငျ့ခွငျးဟာ စိတျပကျြလကျပကျြနဲ့ နရောရဲ့နောကျကြောကို ငေးကွညျ့နခေဲ့တယျ။
သူ့ရဲ့အကွညျ့မှာလညျး နားမလညျမှုတှေ၊ တှဝေမှေုတှေ ရောယှကျနခေဲ့တယျ။
တအောငျ့ကွာတော့ စညျးခကျြမညီတဲ့အသံနဲ့အတူ “ယှဉျပွိုငျခွငျး” ရောကျလာခဲ့တယျ။
ရိုးဖွောငျ့ခွငျးက ဝမျးသာအားရ ချေါတယျ။
“ယှဉျပွိုငျခွငျးရေ.. ယှဉျပွိုငျခွငျး.. နငျ့လှနေဲ့အတူ ငါလိုကျခဲ့လို့ရမလား?”
“မငျး ဘယျသူလဲ? မငျးကငါတို့အတှကျ ဘယျလောကျအကြိုးအမွတျပေးနိုငျမှာလဲ?”
လို့ ယှဉျပွိုငျခွငျးက ပွနျမေးတယျ။
ရိုးဖွောငျ့ခွငျးက သူဘယျသူလဲဆိုတာကို မပွောခငျြဘူး။ ပွောလိုကျရငျ
လှနေဲ့မချေါသှားမှာလဲစိုးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရိုးဖွောငျ့ခွငျးက ရိုးဖွောငျ့ခွငျးပါပဲ။
နောကျတော့လဲ “ကြှနျတျောက ရိုးဖွောငျ့ခွငျးပါ”လို့ သူပွောလိုကျတယျ။
“အျော.. မငျးက ရိုးဖွောငျ့ခွငျးကို.. မငျးက ငါ့ကိုသကျသကျဒုက်ခပေးတာနဲ့
တူမနဘေူးလားကှ? ယှဉျပွိုငျခွငျးတှေ ဒီလောကျမြားနတေဲ့အခြိနျ ငါတို့ရဲ့
မရိုးသားတဲ့ယှဉျပွိုငျမှုမှာ မငျးပါလာလို့ ဘယျဖွဈမလဲ?”
ပွောပွောဆိုဆို ယှဉျပွိုငျခွငျး ထှကျသှားခဲ့တယျ။ ရိုးဖွောငျ့ခွငျးက
မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့ရငျး မဲ့နခြေိနျမှာ အဝေးကနေ အသံတဈသံကိုကွားလိုကျတယျ။
“လူလေး.. လာ လှပေျေါတကျပါ”
ဆံပငျဖွူဖွူဖှေးဖှေး အဘိုးအိုတဈဦးက သူ့ကိုလှမျးချေါလိုကျတယျ။
“ဘာဖွဈလို့ ကြှနျတေျာ့ကို ကယျရတာလဲ?”
“ရိုးသားဖွောငျ့မတျခွငျးဟာ ဘယျလောကျအရေးပါတယျဆိုတာ အခြိနျကပဲ သိလို့ပါ”
အပွနျလမျးမှာ လှမှေောကျနတေဲ့ ပြျောရှငျခွငျး၊ နရောနဲ့ ယှဉျပွိုငျခွငျးကိုတှတေ့ော့
“အငျး…….. ရိုးသားဖွောငျ့မတျခွငျးမရှိရငျ ပြျောရှငျခွငျးကလညျး ကွာရှညျမတညျမွဲဘူး။
နရောလညျး မမွဲဘူး။ ယှဉျပွိုငျခွငျးလညျး ကရြှုံးမှာပဲ”လို့ ဆိုခဲ့တယျ။
မူရငျး — http://www.zijiu.org/node/88
အမဲသားရှောင်တာဟာ လောကီအကျုိး ရှိ/မရှိ (အမေး)။ ။ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားက လူတွေအား အမဲသားလှူဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ အမဲသားရှောင်ြပီး မေတ္တာပို့တဲ့အတွက် မြို့တစ်မြို့မှာ ဘီလူးသဘက်စတာတွေကို ဟန့်တားနိုင်တယ်လို့ စာဖတ်ဖူးပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်သိချင်တာက အမဲသားစားတာကို ရှောင်ခြင်းဖြင့် လောကီအကျိုး ရှိ/မရှိဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်ဘုရား။ ကိုကိုအောင်။ ဆန်ဖရန်စ္စကို (အဖြေ) ။ …
အံ့သြဖွယ်ရာ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးမြို့တော် (ဗဟုသုတ အဖြစ် ရှဲယူထားနိုင်ပါသည်)
အံ့ဖွယ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးမြို့တော်” “အံ့ဖွယ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးမြို့တော်” (လာရန်ဂါ) ဘုန်းကြီးမြို့တော်ဟု နာမည်ပေးထားသော်လည်းတစ်ကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အကယ်ဒမီ စာသင်တိုက်များဖြစ်ပါတယ်.. လူနေအိမ်များမဟုတ် အနီရောင်တဲအိမ်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတဲကျောင်းများသာဖြစ်ပါတယ်.. အဓိက မိမိတို့လေ့လာလိုသည့်ပရိယတ္တိ ပဋိပတ္တိ ပဋိဝေဒများကိုသာ လေ့လာခွင့်ရှိပါတယ်.. အချို့ဘုန်းကြီးများကလည်းစကားမပြောပဲ ဝစီပိတ်ကျင့်ကြံကြပါတယ်.. အလွန့်အလွန်သာယာပြီးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ ဓမ္မစာပေများသာ ကြားရပြီးဆဲဆိုသံ …